Macluumaad – Red Sea Energy
Lacagta ayaa la bixinayaa ka dib markaad isticmaashay koronto.
Waxaan soo diri doonaa qaansheegta maalinta ugu horreysa ee bisha xigta oo leh lacag bixin 14 maalmood ah.
Hubso inaad kubixinaysid waqtigan kama dambaysta ah kahor intaan qaansheegtu u gudbin ururinta deynta.
Kadib markaad qandaraas koronto la gasho Tamarta Badda Cas, waxaad haysataa 14 maalmood inaad baajiso. Waqtiga kama dambaysta ah ka dib, xaq uma lihid inaad ka qoomameyso.
Du kan fortsatt si opp avtalen hvis du har mistet retten til å trekke deg. Oppsigelsestiden er 14 dager.
Waxaan leenahay saddex heshiis koronto oo kala duwan:
SPOT waxay raacdaa qiimaha suuqa ee korontada. Waxaan ku darnaa lacag yar inta udhaxeysa 3-7 senti halkii kWh.
FORVALTNING badanaa 22% way ka hooseysaa suuqa SPOT inta badan xilliyada. RED SEA ENERGY ayaa maamusha qiimaha FORVALTNING. Akhriso sida: halkan
Qiimaha go’an ayaa go’an sanadka oo dhan. Waxaad bixinaysaa isla qiimaha bil kadib bil kadib.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan faa’iidada: halkan
Shahaadada korantada waa lacag dheeri ah oo dowladu maamusho. Kharashaadkan dheeriga ah waxaa loogu talagalay in lagu taageero soo saarayaasha koronto ee Norway soo saarista tamarta la cusboonaysiin karo 100%. Shahaadada korantada waxaa loo qorsheeyay ilaa 2035. Heerka shahaadada korantada ee 2020 waa 0.186.
Sida loo xisaabiyo: Tusaale:
SPOT qiimo = 20 øre/kWh
+ 3 senti halkii kWh. (lagu kordhiyey)
* shahaadada korontada (Elsertifikat)
[(20 øre/kWh) + (3 øre/kWh) = 23 øre/kWh + 23 øre/kWh*0.186 (elsertifikat) = 4.278] = 27.278
+ MVA(moms) 25% *27.278
= 34.1 øre/kWh.
Halkan ka akhriso qiimaha shahaadada korontada